Umsebenzi eDubai City Qala Umsebenzi Wokusesha I-10x Faster 🌟🌟🌟🌟🌟
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at Kwangathi 6, 2014
UJob e-Dubai City
Drop Resume Yakho futhi uthole umsebenzi e-Dubai City!
Jobe phakathi Dubai Idolobha, kungenye yezinketho ezinhle kakhulu. Empeleni lolu suku expats iningi livela Indonesia futhi Izimpendulo ze-Thai. Ukucinga umsebenzi omusha ku UAE. Nokho, Inkampani yaseDubai City ilapha ukukusiza nge yakho ukusesha imisebenzi. Ukuhlinzeka kwenkampani yethu elinye lamathuluzi amahle kakhulu. Enye yezinsizakalo zethu xhuma ama-expats nabaqashi. Futhi uma ulayisha Qhubeka sizokwenza indawo wena eDubai. Sesikhona manje ukuqasha imisebenzi in I-Dubai 2018-2019.
Jobe phakathi Dubai City Inkampani, empeleni, siyasiza Indian futhi UFiliphu ufuna umsebenzi wokuthola umsebenzi Dubai City. Sinalokhu engqondweni, siyasiza ukuqala umsebenzi omangalisayo e-United Arab Emirates. Imisebenzi yokuqashwa kwenkampani yaseDubai City ifaka usizo kosizo lomsebenzi eDubai City. Elinye iphuzu eliyisihluthulelo ukunikela kungumsebenzi wokuthola umsebenzi ku-GCC amazwe amaNdiya. Unalokhu engqondweni, ukuqashwa okuphezulu ku I-United Arab Emirates kwenza kube lula ukuthola. Ngaphansi kwalezo zimo, Dubai City Inkampani iba Inkampani ehamba phambili yokuqasha eDubai.
Dubai City Inkampani manje isiza ngisho baxoshe abesifazane ukuthola umsebenzi. Ngakho-ke uma ufuna imisebenzi eMiddle East. Kufanele ubheke iwebhusayithi yethu yenkampani. Empeleni, iqembu lethu selisungule abaningana izinketho zokufuna umsebenzi eDubai. Kuze kube manje sisiza abaqokiwe abavela eNdiya nasePakistan. Ngesibonakaliso esifanayo ukhetho lwendawo. Futhi nakwamanye amazwe ase-Middle East. Ngokuqinisekile uzothola inani elihle ngokusebenzisa zethu izinsizakalo zokuqasha e-United Arab Emirates.
Ngaphezu kwalokho, futhi kukhona indlela enhle kakhulu abaphathi bamazwe afundile. Isibonelo ngezinsizakalo zethu, ngisho nabathathwe emazweni aphesheya bangakwazi thola umsebenzi ngemfundo ye-MBA.
Imisebenzi e-Dubayi kanye nomsebenzi ongcono kakhulu wokuthola umsebenzi e-UAE
Dubai City Company njalo balinde abafuna umsebenzi omusha ngaphandle kokulibala. Sihlale sijabule uma sikwazi ukukhethwa ngokushesha kwabasha e-UAE. Dubai City Company yiyona ehola phambili yokuqashwa kwezokuxhumana ikhasi lenkampani ku-GCC. Ngaphambili, inhloso yethu kuhlala kusiza izinkampani zokuqasha ukuthola ukubhaliswa kwe-CV eMiddle East. Layisha Qalisa kabusha bese uthola a umsebenzi eDubai City namuhla ngokushesha.
Ukuze uthole okwengeziwe mayelana ukuthi bangaba kanjani abafuna umsebenzi e-Emirates. Ngakolunye uhlangothi sicela uvakashele isigaba sethu sokuqalisa sokulayisha njalo. Ngokusekelwe kokusebenzisana kwethu sicela ubhalise imininingwane yakho yesicelo kithi indawo yomsebenzi in Dubai City. phezu 50,000 abafuna umsebenzi bake basebenzisa uhlelo lokuthola ozakwethu lomsebenzi futhi bajabule i-100% futhi ikakhulukazi babekwe e-UAE. Isibonelo nje elinye lamakhasimende ethu lisanda kubekwa emakethe umsebenzi wephupho e-Abu Dhabi.
Empeleni, usebenzisa i-Dubai City Company. Ungafakwa ku-UAE. Lokhu kuyiqiniso. Sisiza Abazingeli bezemisebenzi yamazwe ngamazwe ukuthola ukuthola umsebenzi ngaphandle kwamanye amazwe. Ungalayisha i-CV yakho ukuxhuma nabaphathi bokuqasha. Emhlabeni wethu, kunabantu abaningi kakhulu ukuphupha nsuku zonke mayelana nendlela yokuphila yaseDubai. Kepha, iqiniso akubona bonke abanaso isibindi sokuqala. Isesha ngisho elula izithuba zemisebenzi njengomshayeli. Bese ukuthuthela e-Dubai zinike isikhathi. Ngaphezu kwalokho, umzamo futhi kubiza imali eningi. Ngisho nokukhuluma nomunye abavela eNdiya noma e-Kuwait. Mhlawumbe umsebenzi onzima wokuphatha. Kepha akudingeki ukhathazeke ukuthi ungawuthola umsebenzi. Ngezinsizakalo zethu, ungathola umsebenzi ngokusebenzisa i-Linkedin noma WhatsApp. Vele, wonke umzingeli wemisebenzi angabheka nendawo engcono kakhulu yomsebenzi wethu blog ukubuyekeza. Ngakho-ke ekukhanyeni ukuthi uvelaphi. Kufanele ukwazi lokho Dubai City iyindawo engcono kakhulu ngokuba umsebenzi wephupho.
Layisha i-Resume Yakho ngomsebenzi e-Dubai City
Ubufakazi obunamandla obuningi bokuthi thola imisebenzi emisebenzi e Dubai imizwa. Uma kunjalo, Faka isicelo bese ugcwalisa ngaphandle kwesicelo somsebenzi kithi umsebenzi wokungena. Unikezwe la maphuzu, isiqalo ukufaka isicelo sokuhlinzekwa kwemisebenzi e-Dubai Idolobha namuhla. Njengoba sekuphawulwe kwiwebhsayithi yethu inikeza usizo lokuhle kakhulu nakamuva izithuba zemisebenzi in Dubai City. Ukufingqa eyethu ukusesha umsebenzi izinhlelo zokusebenza zivuselelwa nsuku zonke kwimithombo yezokuxhumana. Manje sesiphatha izindatshana ezimbalwa mayelana ukuthi ungaqala kanjani umsebenzi eMpumalanga Ephakathi.
Nakuba lokhu kungase kube yiqiniso ukuthi singcono kakhulu umsebenzi wokuthola umsebenzi sebenze kwelinye izwe. Ngakolunye uhlangothi iMpumalanga Ephakathi kusobala ukuthi iyona engcono kakhulu indawo ongayithola Dubai imisebenzi. Ekuhlaziyweni kokugcina, Layisha Qalisa Yakho ngoba ukunakekela imisebenzi emisebenzi e Dubai senza zonke izinto ezicatshangelwe wena. Ngokuhamba kwesikhathi, indlela enhle yokuthola i-Dubai Career ngokusebenzisa i-ejensi yethu yokuqasha. Ngokwengxenye enkulu, imisebenzi phesheya kukhona akulula ukuthola.
UJobe eDaily City ungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokuthumela amazwe ngamazwe !.
Imisebenzi e Dubai - United Arab Emirates
I-Dubai City Inkampani ibasiza abafuna imisebenzi kusukela nge-2016 ngenxa yalokho. Ngokuvamile, sibheke abafuna imisebenzi emangalisayo kusuka ku-Facebook & Linkedin. Ohambeni olude, sisiza abafuna umsebenzi ukuthola imisebenzi kanye qalisa umsebenzi e-United Arab Emirates. Kuze kube sikhathi samanje newebhusayithi yethu emangalisayo yokumaketha imithombo yezokuxhumana. Ngaphandle kokulibala, ungakwenza thola ithuba elisha ngaphansi kwezinsuku ze-7. Noma kunjalo, uma ufuna ukuthola ukunikezwa komsebenzi kusuka the Top Izinkampani ze-100 ku-GCC. Ngokuthembeka, uma ufunde kahle ungakwazi funda eHarvard kusuka eDaily City. Dubai eqinisweni ukuvula iminyango yabaphathi. Ubani ongathanda ukukwenza bathuthukise umsebenzi wabo ngemisebenzi ekhokhelwa kahle ?.
Kungani UJob e-Dubai City ingenye yezinto ezingcono kakhulu zokuthumela amazwe ngamazwe ?. Ngoba zikhona amathuba akhokhelwe kakhulu!. Ngaso sonke isikhathi ngesikhathi futhi kufanele ngempela ukuba uzitholele ASAP. Ngakolunye uhlangothi, kufanele ubuke nezinkampani zokuqasha. I-Careerjet e-Dubai futhi Iwebhusayithi yokuqasha i-Monster Gulf. Kufanele ngempela ukusebenzisa ne-CV yakho.
Umsebenzi wehhotela e Dubai
I-Dubai iyindawo yokuphumula yabathutheli bamazwe ngamazwe. Esinye sezibonelo I-Burj Al Arab e-Dubai ihotela elinethe kakhulu kunazo zonke emhlabeni. Futhi enye ingukuthi ihhotela laseVersace e-Dubai. Ngalesi sikhathi esincane, kufanele usebenzise amasevisi wethu wokusesha umsebenzi. Ukusesha futhi ukuthola umsebenzi embonini yehhotela. Kuze kube manje, ungabhalisa kwi-website yethu futhi uhlole ukuthi ubani oqasha e-Dubai. Ngokuzumayo Abu Dhabi /Dubai/ I-Qatar / i-Bahrain / i-Kuwait / i-Oman iyindawo ebalulekile. Ngoba abathengisi abangathanda ukusebenza emikhakheni yamahhotela nokwamukela izihambi. Ngasikhathi sinye, sisiza abangenele ukhetho ngaphezulu Amaqembu e-WhatsApp eMpumalanga Ephakathi. Bambalwa abaphathi abaqashayo abathumela imisebenzi yamahhotela kuWhatsApp. Ngendlela efanayo, inkampani yethu ihamba phambili. Ikakhulu Abazingeli bomsebenzi bamazwe omhlaba. Kanye nemithombo abaphathi be-United Arab Emirates.
Ukuze siqale sithande ukuzwa kuwe uma ungathanda ukuthola umsebenzi Idolobha lase-Dubai. Wazi ini ngempela ngeDubai ?. Ngaphambili sicela ubheke inkomba yethu enemininingwane. Okudingayo ukuthuthela e-Dubai City Kufanele ucabangele ezinye izindlela eziningi. Ngaphambi kokushiya izwe lakho. Lapho kufanele ubhalisele khona i- I-visa. Futhi lapho ungabhuka khona izindiza ngemuva. Ngakolunye uhlangothi, iqembu lethu lihlinzeka nezeluleko. Futhi zihle kakhulu kubantu abasha. Ikakhulu kulabo abafuna umsebenzi Ngaphakathi. Isibonelo, ungabheka izingosi zomsebenzi ezilinganiselwe lapho ungathola khona umsebenzi.
Manje sisebenzela amaqembu we-WhatsApp
Inkampani yaseDubai City manje isiyangena Amaqembu we-WhatsApp. Manje usungaqala ukusebenzisa okwakho umakhala ekhukhwini ukuqashwa. Uma kungenzeka kuphinda izinombolo zeselula ukuqashwa. Ungaqala ukusebenzisa ifoni yeselula ye-WhatsApp. Silapha kukusize uthole umsebenzi nge-WhatsApp. Inhloso yethu ukubeka kuwe imisebenzi engcono kakhulu e-Emirates. Abameli bethu Abaqashile abasiza abafuna umsebenzi. Mane nje uthi abaqashiwe ukuthola umsebenzi e-UAE.
Ngakolunye uhlangothi, ungangeza inombolo yakho yocingo. Ngokuvamile ngikhuluma namaqembu e-WhatsApp eDubai. Iqembu lethu ukucinga izikhala zomsebenzi eDubai Idolobha. Bese kuthunyelwa umsebenzi wokuthumela ku- abaqokiwe abavela eBangladesh futhi expats from Russia. IDubai City Company iyaziqhenya ngomsebenzi wethu wokuqasha ngisho Spanish Hindi expats. Ngaphezu kwalokho, Abafuna imisebenzi eTurkey, Abantu baseSri Lankan abafuna ukusebenza eDubai. Futhi sikhona esiza ngisho nabafuna umsebenzi ePortugal futhi IFrance iyachaza.
Sinethemba lokuthi ubhalisiwe nathi. Iqembu lethu libheke phambili ikusiza ukuthola umsebenzi e-United Arab Emirates.
Ama-ejenti wokuqashwa kanye nezindawo zomsebenzi e-Dubai
Ngenkampani yethu, ungayithola izikhungo zokuqasha eziqasha Dubai. Imininingwane eyengeziwe yokuthi ungasifaka kanjani isicelo somsebenzi. Vakashela iphrofayili yabo futhi uthole okuningi ngemakethe yomsebenzi eDubai. Kufanele futhi thola okuningi ngephupho laseDubai. Ngokuvamile ukukhuluma ngabaqashi abaqondile eDubai. Ngokubambisana nezinhlaka zokuqasha kufanele vakashela izinkampani zokuqasha e-Dubai. Le yindlela egqugquzelekile futhi ehlakaniphile yokuthola abaqashi e-UAE.
Kufanele ubuke futhi iseluleko sabashayeli bezisebenzi ezintsha emhlabeni wonke e Dubai. Ngezikhathi ezithile kufanelekile ukubukwa. Ngubani oqasha eDubai okwamanje? Abavakashi abangaphezu kwe-80k ngenyanga bavakashela ikhasi lethu ukuthola umsebenzi eDubai City. Zonke zinjalo Ukufuna izingcezu zezeluleko mayelana nokuzingela umsebenzi. Kepha kuwebhusayithi yethu ungaba nokubukwa indlela yokuthola umsebenzi ku-Google Dubai. Inhloso yethu ukuhlinzeka izingcezu eziningi zolwazi kubantu. Ngenhloso ye ukukusiza ukuthola umsebenzi nezinkampani ezinhle.
Izizwe zakwamanye amazwe e-Dubai
Olunye uhlobo izinsizakalo ze-India zichitha ngubani ofuna ukufakwa. Ngaphezu kwalokho usizo jikelele ukuthola umsebenzi njengomhloli wasePakistan. Idolobha laseDubai likhula ngokushesha okukhulu. Leli dolobha liba isikhungo sebhizinisi e-United Arab Emirates. Inkampani Dubai City ukusiza abafuna umsebenzi ngokusemandleni ethu. Siyeluleka Cishe noma yiziphi izizwe zingawuthola kanjani umsebenzi vakashela i-visa. Ukunikeza izingcezu zolwazi ngokuthi ungahambisa kanjani eDubai. Zonke izinsuku sinikela ngezindaba nezibuyekezo eziteshini zethu zokuxhumana. Kusukela i-2016 sikhona ukusiza iNingizimu Afrika ukuthola umsebenzi e-UAE.
Ithimba lethu libeka ama-athikili ku-intanethi. Inhloso yethu ukukusiza ukuba ufinyelele umsebenzi wakho wephupho. Kungakhathaliseki uma ukhona ukufuna imisebenzi yothisha e-Dubai. Noma ngisho Imisebenzi ehlobene nemoto ehlinzekwayo e Dubai. Sinezinto ezithakazelisayo. Ikakhulukazi ekusizeni ukuba uthole umsebenzi ngokushesha.
Ingxoxo ku-Dubai Companies
Kuningi ongakhetha kukho thola futhi udlulise i-interview e-Dubai. Asikho iseluleko esisodwa kule ndaba. Konke esingakwazi ngempela ngalesi sihloko. Ingabe ngempela ngubani oqasha Imisebenzi e Dubai 2018 no 2019. Ukuthola lokho kuxoxwa kwezibalo ze6. Ngeshwa, udinga ukuqala usebenze e-Emirates. Okwedlula i-10 kuze kube seminyakeni ye-15. Futhi yize lokhu kungenzeka yiba yithuba elihle kakhulu lomsebenzi. Futhi imisebenzi ekhokhelwa kakhulu iza okusha kusuka izithuba zemali e-Dubai. Ngokuyinhloko imakethe yezimakethe inikeza ingxoxo yalolu hlobo lwemisebenzi.
Ngesikhathi esifanayo wonke umzingeli wemisebenzi. Kufanele nakanjani bacabangele isicelo seNdebe Yezwe ye-2022 e-Qatar. Kufanele futhi kukhunjulwe ukuthi kunezikhala eziningi zemisebenzi e-UAE. I-Middle East yonke iyakhula. The ibhizinisi ukwakheka kuyanda. Kwakhiwa izakhiwo ezintsha emazweni e-GCC. Isibonelo, izwe kuphela elingaba nohlelo oluphezulu lokuthuthukisa amabhizinisi olukhona. Ingabe I-Saudi Arabia nokuqasha bonke abahlala ezweni. Futhi kufanele ube nezwe leli kucatshangelwe ngenhloso yokuthutha. Enye iphuzu eliyinhloko ukufuna umsebenzi e-Abu Dhabi. Isibonelo, ungasesha izikhala e-Abu Dhabi. Bese ususwa kwenye idolobha.
UJobe eDubai City ungenye ehamba phambili ukuthengiswa kwamazwe ngamazwe!.
Ukusiza ukuba uthole umsebenzi eMpumalanga Ephakathi
Esinye sezihluthulelo zocwaningo lwakho kungenzeka ukuthola umsebenzi kahulumeni ku-UAE. Lolu hlobo lomsebenzi ngakolunye uhlangothi. Muhle kakhulu kubaphathi besikhathi eside. Ikakhulu uma unomndeni nawe. Ngasohlangothini olubi, leli thuba lomsebenzi. Kukhulu kakhulu kubantu abangakwazi ukukhokhela umsebenzi. Ngasikhathi sinye, ayikhokhelwa kahle. Ikakhulu uma siqhathanisa namanye amafemu owaziwayo. Into yokuqala okufanele uyikhumbule uma ufuna ukubekwa ngokushesha ngokwanele ukuthi ungadedeli isabelomali. Udinga ukwazi ukuthi uzikhuthaze kanjani ukuqasha abaphathi e-UAE.
Esinye isihloko esingathanda ukusifihla nawe ukufuna umsebenzi e-Dubazini ngokuvakashela i-visa. Kumele ube nalokhu engqondweni. Ungabheka imisebenzi e-Emirates ekuvakasheni i-visa. Kodwa kufanele qala umsebenzi nge visa yokusebenza. Okuhle kungase kube ukukhuluma nabanye abantu. Ikakhulukazi nalabo asebevele benesabelo somsebenzi e-UAE. Ungasebenzisa yethu Isiqondiso eMpumalanga Ephakathi qembu bese ucela amathiphu alula. I imakethe yokuqasha umakhalekhukhwini ngokuya phambili phambili. Ngokushesha abantu abaningi bazosebenzisa ifoni ephathekayo njengenye indlela eya ku-PC.
Ekuhlaleni kokugcina sicela uthande izihloko zethu kanye izindaba mayelana neDaily City. Sikubeka kuwe. Ukuzama ukweluleka ukuthi yini okufanele uyenze e-Emirates. Futhi ungenzani ku-UAE. Ngaphezu kwalokho ithimba lethu labathobekile labalobi silindele njalo ngomzuzu. Ukuthi wabelane ngendaba yethu ukusiza abanye ukufinyelela imigomo yomsebenzi ku-Linkedin noma ku- Indawo yomsebenzi weNaurki Gulf.
Njengoba unikezwe la maphuzu, sicela usize abanye ukuxhumana nabasebenzi, ku LinkedIn ngubani ongathola amathuba!
Dubai City Inkampani uye wakhonza International abafuna umsebenzi
Ngokuvumelana ne Izibalo zemisebenzi kaHulumeni kuze kube manje, iDaily City yindawo engcono kakhulu yokuqala umsebenzi omusha. Ngokuvamile nenkampani yethu ungaba nemisebenzi emisebenzi ngaphandle kokulibaziseka yi-100% isiqinisekiso sokwaneliseka. Ngalesi sikhathi esincane, sinikeza 100% imisebenzi inikeza isiqiniseko ngemuva kokubhaliswa. Ngokushesha uzothola umsebenzi ngoba inkonzo yethu iyamangalisa. Ubufakazi obuningi obunamandla obudinga nje ukuthumela uhlelo kwithimba lethu. Futhi uthole ithuba lokuthola umsebenzi e-Emirates. Ngokujwayelekile sicela ulandele imiyalelo enikeziwe ekupheleni kwekhasi. Ngenhloso yokusihlola ezokuxhumana nabantu kanye nokuhlaziywa kokugcina Amaqembu we-WhatsApp we-GCC. Bheka ukuthi mangakhi amakhasimende esiwasebenzelayo ngesikhathi -Google I-Facebook ne-Linkedin.
Njengoba sinikezwe la maphuzu sicela ulandelele ku-Linkedin. Ngisho thola kabanzi mayelana ne-Dubai. Lapho sinabo abalandeli be-30,000 kuma-social media. Ngalokhu engqondweni, ungakwazi ngokushesha ukuthola umsebenzi eDaily City. Okwamanje usizo lomsebenzi nokuqashelwa olunikezwa yinkampani yethu nakanjani. Eqinisweni, siyizikhundla eziphezulu eziqashiwe zokuthola umsebenzi usizo lomsebenzi kubantu abafuna umsebenzi emhlabeni wonke abavela eNdiya e-United Arab Emirates. I-Dubai City Company, empeleni, inkampani ehola ukuqasha ku-Linkedin. Kodwa ngakolunye uhlangothi, asiyena kuphela onikezayo izindaba zokuqashwa kwabafuna umsebenzi.
Ngokwalesi sizathu, landela ukuqashwa kwethu inkampani kuFacebook. ngokuvamile, sinokuthandwa okungaphezulu kwe-50,358. Futhi njengoba kukhonjisiwe ngenhla, i-25,680 ikhuluma ngathi ukufingqa imithombo yezokuxhumana nabantu. Inkampani Dubai City - Sizokusiza uzithengise wena e-United Arab Emirates.
Ukukhonza Labo Abasikhonze: The isiko le inkampani yethu, eqhutshwa yibhodi labaqondisi e-UAE nase-UK
Ngakolunye uhlangothi, i-Dubai City Recruitment ku-2018-2019. Ingabe empeleni kuyisihluthulelo sempumelelo!
PHEKA UKUBHUMA KU-UAE
Ingabe ufuna ukuthola UJob e-Dubai ?. Sicela uvakashele Iqembu le-WhatsApp labafuna umsebenzi. Engeza inombolo yakho yocingo bese uthumela i-CV ukuqasha abaphathi.
Ngubani owaziyo ukuthi uzoba nini a umuntu obekwe kahle e-United Arab Emirates.
Layisha kabusha Emadolobheni Akhula Ngokushesha Kakhulu Emhlabeni!